Mutambo weZigaro mabhuku, epic fungidziro yenguva. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Fantasy, Literature, Novela, dzakawanda
Mutambo weZigaro mabhuku.
Kutsvaga "mabhuku Mutambo Wechigaro " Yakaputika pawebhu mushure mekuburitswa kwenyaya dzeTV maererano nenyaya iyi. Game yezvigaro ndiyo chekutanga zita reakakurumbira mabhuku saga Rwiyo rwechando nemoto. Iyo epic yekufungidzira nganonyorwa inoitika mune yekunyepedzera yepasi yakagara munguva dzekare.
Iri basa rakanyorwa naGeorge Martin uye rikaburitswa muna1996 neHarperCollins imba yekutsikisa muUnited States neSpain naGigamesh. Iwo akateedzana kazhinji akakonzera kukanganisa kukuru paruzhinji rwevanhu. Munyori wacho aigara asina mukurumbira, asi mukurumbira wayo wakapararira nekuda kwekuti muna 2011 yakagadziriswa terevhizheni neiyo HBO network.
1 Nezve GRR Martin: yekutanga uye yechipiri nhanho
2 Hwaro uye kurudziro
3 Mutambo weZigaro nyaya yenyaya
4 Mutambo weZigaro mabhuku
4.1 Chirongwa cheMutambo weZigaro (1996)
4.2 Zano reClash of Kings (1998)
4.3 Dutu reMakondo (2000) zano
4.4 Mutambo wemakungu (2005) nyaya yenyaya
4.5 Zano reKutamba nemaDragons (2011)
4.6 Rechitanhatu uye rechinomwe mabhuku (akamirira kuburitswa)
5 Anoshamisa Universe Martin
Nezve GRR Martin: yekutanga uye yechipiri nhanho
George Raymond Richard Martin akaberekwa munaGunyana 20, 1948 muNew Jersey, United States. Iye munyori uye screenwriter anozivikanwa kazhinji saGeorge RR Martin mumabhuku ake uye seGRRM munharaunda yake yevanofarira.
Iye akarererwa seyekutanga pavatatu vehama; amai vake vaibva kumhuri yeIrish uye baba vake vaibva kuItari -German. Aive anofarira kuverenga kubva pazera diki kwazvo, saka hunyanzvi hwake hwekunyora hauna kutora nguva kuti huve pachena.. Akadzidza utori venhau kuNorthwestern University muEvanston uye akapedza kudzidza muna 1971.
Martin akaroora Gale Burnick muna 1975 (muchato uyu wakangogara makore mana), uye akazvisimbisa semunyori mumakore gumi iwayo nekuburitswa kwemamwe mabasa engano; yakanyanya kukudzwa yaive Kufa kweChiedza (1997). Basa rake rakagamuchirwa nemimwe mibairo yeNebula neHugo.
Kubudirira uku kwakamutungamira kuti ashande semunyori wezvinyorwa zveindasitiri yeHollywood uye mumaterevhizheni akasiyana siyana senge, semuenzaniso, Runako uye Chikara (1987). Pakupedzisira, Muna 1996, Martin akasiya basa ndokugara muNew Mexico kuti azvipirezve kuzvinyorwa.
Gore rimwe chetero bhuku iri rakazvarwa iro rakatanga nhanho yake yechipiri semunyori, Game yezvigaro (1996). Kubva ipapo George akatanga kunyora saga yakamutungamira mukurumbira wepasirese uye achiri kugadzira. Rwiyo yechando uye moto.
Hwaro uye kurudziro
George RR Martin akadhirowa pane nhoroondo yeiyo chaiyo Middle Ages yekugadzira Game yezvigaro nemamwe mazita ari musaga Rwiyo rwechando nemoto. Kurwisana kwevagari mukorona yeChirungu inozivikanwa seHondo yeMaviri maRoses yakashanda seyakakurudzira. Muchokwadi, Westeros, kondinendi yekunyepedzera iyo nzvimbo yacho inoitika, yakafanana nehukuru uye chimiro kuEurope.
Munyori akazivisa kuti akafemerwa nevanyori vakaita sa: JRR Tolkien, naTad Williams, vamiririri vakakura vefungidziro uye ngano. Nekudaro, rake basa rinosiyana zvakanyanya neiro revanyori nekuti anonatsiridza nharo chaidzo kupfuura idzo dzenhema.
George RR Martin akatorwa.
Game yezvigaro ndeyezvinyorwa zvemhando yekufungidzira. Zvisinei, zvinhu zve surreal zvinoshandiswa naMartin mune iri basa zvaive zvishoma uye zvakanyanyisa.
Mutambo weZigaro nyaya yenyaya
Iyo nharo huru iri nezve kurwa kunogara kuripo pakati pedzimba dzakasiyana dzehumambo hweMadzimambo manomwe nesimba reWesteros, kondinendi yekufungidzira yakagadzirirwa naMartin. Pasina chero rudzi rwekudzivirira, munyori anonyanya kushandisa zano rezvematongerwo enyika kubva kune dzimwe nyaya dzine chekuita nerudo, kutengesa, mhirizhonga, bonde uye makunakuna.
Pakutanga Imba Targaryen yaitonga zvese, asi Robert Baratheon anokwanisa kutora korona mushure mekurwa kukuru, mushure memazana maviri emakore mushure mekutonga kwega kweiri dzinza.
Kubva pachiitiko ichi, matatu makuru masisitimu ehurongwa akagadzirwa anoitika makore gumi nemashanu gare gare. Izvi zvinoitika panguva imwe chete uye nekuvaka zano rebasa Game yezvigaro uye zvakare kutanga kwenyaya ya Rwiyo rwechando nemoto.
Mutambo weZigaro mabhuku
Iyo yakabudirira zvinyorwa zvakateedzana zvakakamurwa mumabhuku manomwe:
Game yezvigaro (1996).
Kuwirirana kweMadzimambo (1998).
Dutu remapakatwa (2000).
Mutambo wemakunguwo (2005).
Kutamba kwamakava (2011).
Mhepo yechando, iri kuita 2019.
Chiroto chirimo rinova ndiro basa rekupedzisira uye harina musi wakarongwa parizvino.
Chirongwa che Game yezvigaro (1996)
Mubhuku rekutanga Martin anokwanisa kuvaka izvo zvinongova kutanga kwenyaya izere nezvishamiso, zvichidaro kutora muverengi. Rufu rwaMambo Robert rwakonzera kusawirirana pakati pemhuri dzakasiyana kuti vazive kuti ndiani achatora chigaro ichi. Iyo nyaya inotangira muVanomwe Humambo, uko mwanakomana wedangwe wamambo anoti chinzvimbo chake, asi uyu, sezviri pachena, akaberekwa nemakunakuna.
Panguva imwe chete, Martin anokwanisa kutarisa pahupenyu hwaDaenerys Targaryan naJon Snow, vanonyanya kutaurwa munhevedzano. Kuchamhembe, kune Rusvingo runosimbisa muganhu pakati peWesteros nedzimwe nyika, kupfuura apa, masimba erima ekare ari kusimuka.
Munyaya yacho chaizvo Jon Snow ndeye bastard ari weNight's Watch, chinzvimbo chiri kutarisira kuchengetedza Rusvingo. Zvakajairika munhoroondo kuti Martín anopa munhu simba, uye zvinoratidza kuti kunyangwe kufunga kushoma kunogona kuunza shanduko huru muchirongwa.
George RR Martin, munyori we Game of Tones.
Daenerys ndiye wedzinza rekupedzisira reImba Targaryen, akakodzera mutongi weFeeling Kingdoms.. Iye anogara muutapwa uye hapana anoziva nezvehupenyu hwake, asi zano racho rinomuunza padyo nekumaodzanyemba, kwaanoda kutora chigaro cheushe kurudyi.
Nhoroondo ye bhuku rino rinopera Daenerys paanopona pamarimi uye anova mai vemashato matatu.
Chirongwa che Kuwirirana kweMadzimambo (1998)
Mubhuku rechipiri mune hondo yevagari vemo muhumambo Humambo hwechigaro. Pamuganhu, iyo Night's Watch yadarika Rusvingo uye Jon anofanira kuzvipfuudza iye semunhu anopinda mukati memapoka ane hutsinye. Daenerys, zvakadaro, inonanga kumadokero nemadhiragi ayo nevanhu vayo.
Chirongwa che Dutu remapakatwa (2000)
Chechitatu chebhuku zvinhu zvichiri kusagadzikana muVanomwe Humambo nehondo. Iri zvakare ibhuku rakarebesa, asi Martin anoshandisa rondedzero kuita kuti kuverenga kuve nyore. Ichi chikamu chinotanga iko iko kunoperera inovarenzi yapfuura, Pachave nemibatanidzwa, asi pakupedzisira kupandukira kuchabuda.
Kune rumwe rutivi, Daenerys anoenderera mberi achienda kunotora mauto. Zvichakadaro, kuMadziro, hapana anoziva kuti mauto akaipa aRayder ari kuvhara uye Jon Snow ari kuuya navo.
Chirongwa che Mutambo wemakunguwo (2005)
Mubhuku rechina Hondo iri kupera, asi kufamba kwayo kwasiya kurasikirwa kukuru uye kudeuka kweropa.. George RR Martin mune iri zita anokwanisa kutarisa kune vamwe vatambi, achigona kujekesa ruzivo rwekare uye nekugadzira zvirongwa zvitsva.
Chirongwa che Kutamba kwamakava (2011)
Iri bhuku rechishanu rinoitika panguva imwechete neiya yapfuura, uye rinotarisa pane zviitiko zveDaenerys naJon.. Hondo yekurwisana naRayder inoitika kuMadziro, uye amai vemashato vanogara muMeeren nezvisikwa zvavo uye vanobvuma kuroora kuti vagotonga murunyararo.
Rechitanhatu uye rechinomwe mabhuku (akamirira kuburitswa)
Bhuku rechitanhatu richiri kugadzirwa, uye George anofungidzira kuti richaburitswa mu2019.. Nezve chikamu chechinomwe uye chekupedzisira chikamu chesaga, hapana rumwe ruzivo kunze kwemusoro wenyaya: Chiroto chirimo. Bhuku rechitanhatu rinotarisirwa kunge rakabuda nenguva kwete kunonoka, uku kungave kurova kwakachipa kune vateveri vane shungu.
Anoshamisa Universe Martin
Game of Thrones rave riri basa rakatanhamara mune yekunyora indasitiri uye mune yayo genre yaro nhoroondo nhoroondo, hunhu uye kuvaka kweakawanda mavara. Con chimiro chake chakashinga, George RR Martin yakakwanisa kuburitsa zvakasikwa izvo neimwe nzira kana imwe zvinobatana kwese kwese.
Kunze kwemavhoriyamu manomwe anoumba iwo akateedzana Rwiyo rwechando nemoto, Martin anyora akati wandei akasiyana enhau pfupi Sezvo iyo nyika yechando nemoto (2014), Iyo knight yehumwe hushe (2015), Moto neropa (2018), pakati pevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku: Mutambo Wechigaro
Emilia Pardo Bazán: akasarudzika mabhuku uye hupenyu hwake